Olana eny amin’ny oniversite :: Kianin’ny mpampianatra mpikaroka ny minisitry ny Fampianarana ambony • AoRaha
Olana eny amin’ny oniversite Kianin’ny mpampianatra mpikaroka ny minisitry ny Fampianarana ambony
Nanakiana mafy ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny mpiara-miasa aminy ny mpikambana ao amin’ny sendikan’ ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra (Seces) nandritra ny fivoriambe nataon’izy ireo, omaly . Namba­ran’izy ireo fa tsy mahavaha olana io minisitra io, ka mahatonga ny oniversite ho toerana itangoronan’ny fitokonana ankehitriny
“ Hita ny tsy fahatomombanany na dia manana teboka mampiavaka azy ihany aza izy. Misy ny ezaka efa ataony saingy tokony hampiany izany”, hoy ny Pr Ravelonirina Sammy Grégoire, filohan’ny Seces. Na izany aza , nanamafy ny avy ao amin’ny Seces fa tsy mitaky ny hanalana na tsia an’io minisitry ny Fampianarana ambony io izy ireo.
“Manolotra hevitra izahay amin’ny Filoham-pirenena mba tsy ho olona manilika andraikitra no hatao amin’ny toeran’ny minisitra. Olona izay mahafantatra ihany koa ny zavatra iainan’ ny mpianatra sy ny mpampianatra ety amin’ny oniversite. Tokony hahay hifantina an’izay olona mahavaha olana ihany koa izy ary mahay mifandray amin’ireo mpiara-miasa aminy ”, hoy ny fanampim-panazavan’ny Pr Ravelorinirina Sammy Grégoire. Na izany aza, nanamafy ireo mpampianatra fa “ tsy manana olona hatolotra ho minisitra satria tokony ho afaka hatao minisitra avokoa ny mpampianatra mpikaroka rehetra”. Etsy andanin’izay , nilaza fa hanohy ny fampiatoana ny fampianarana sy ny fikarohana rehetra ihany koa ireo mpa­mpianatra mpikaroka ao amin’ny Seces sampana Antanana­rivo. Hanampy azy ireo ny any amin’ny faritra hafa . Nambaran’ izy ireo fa tsy misy ny vahaolana azo tsapain-tanana taorian’ny dinika niaraka ny Praiminisitra tamin’ny volana Avrily. “ Hisy ny fivoriambe amin’ny talata ho avy izao handinihana izay mety ho tohin’ny hetsika”, hoy indray iry loharanom-baovao iry.
Fandaminana tanàna Noravaina ireo tsena tsy ara-dalàna telo amby roapolo eny Analakely
Fiparitahana valanaretina Feno dimanjato ireo mararin’ny Covid-19
Fampitaovana ny mpianatra Malagasy :: Nosantarin’ny Filoha ny fizaràna kojakojam-pianarana tena raitra